musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiFrench Vanotamba Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBlack Genius inonyatsozivikanwa nezita rokuti "DIY". Our Moussa Sissoko Childhood Story pamwe neS Untold Biography Facts inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira panguva yehucheche kusvika panguva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, mamiriro emhuri, hukama hwehukama, uye mamwe akawanda OFF-Pitch chokwadi (hachizivikanwa) pamusoro pake.
Hungu, munhu wose anoziva kuti ari mutambi wepamusoro asi vashomanana vanofunga nezveMossa Sissoko's Bio iyo inofadza chaizvo. Iye zvino pasina kunze kwekuita, ngatitangei.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Upenyu Hwekutanga uye Hwemhuri
Moussa Sissoko akaberekwa musi we 16th yaAugust, 1989 muLe Blanc-Mesnil, France. Akaberekerwa kuvabereki veMalawi vane kodzero vashoma vanozivikanwa pamusoro. Sissoko amai vaiva amai veimba apo baba vake vaishanda sevashandi vekuvaka nenguva yekuzvarwa kwake.
Sissoko akaberekwa semukuru kune vana vana, nehanzvadzi vatatu vaduku. Kukura muLe Blanc-Mesnil musikana Sissoko akanga achiita zvekutamba mubhokisi nechishuwo uye akafunga kare kuti mutambo uyu waizova wakanaka kwaari munguva yemberi. Mumashoko ake;
"Ndakakurumidza kuziva kuti bhora rinogona kunditungamirira kuti ndive noupenyu huri nani".
Kuva nerutendo mukutenda kwake kwakange kuriwowo nevabereki vake, Young Sissoko akange atanga kutanga kuvaka basa mumutambo wepamutambo sezvaakanyoresa kechikwata chechidiki, Esperance Aulnay paaiva nemakore matanhatu chete. Esperance Aulnay ikambani yevechidiki inenge iri pedyo Aulnay-sous-Bois, guta riri kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweParis.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Career Buildup
Sissoko akazvipira makore matatu anotevera ehupenyu hwake kuna Esperance Aulnay kwaakatamba nebhokisi nechishuwo chakakonzerwa nekuzvikurudzira kwemazuva ari nani mberi. Kare kumashure, akadzidzira katatu pavhiki kubhidhiyo pasi pekutungamirirwa nemudzidzisi Adama Dieye, uyo zvino anoshanda somunyori wechikwata futsal team. Sissoko anorondedzera Dieye semuongorori anokosha mukubudirira kwake kutaura;
"Ndiri pano nhasi nekuda kwake"
Basa rake rekambani yevechidiki rakatanga kutendeuka paakazobatanidza Red Star Paris pane imwe nguva yakareba. Yakanga iri paRed Star iyo Sissoko akaisa maitiro anoshamisa akamuita kuti aende kuTououse apo akatanga kuona hupenyu hwakanaka iyo ibhora raive naro mumutengo.
Aine chido chekutamba zviri nani mumutambo wose, Sissoko haana kungofadza vatungamiri vake pamatunhu akasiyana asi akasimuka mumativi ekirabhu.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Simuka Mukurumbira
Yaiva paTououse kuti Sissoko akaita Champions League debut yake mu2007. Akaita zvakanyanya kufadza uye akadanwa munguva inotevera. Izvo zvakare kudanidzira kunomuwana mamiriyoni emakambani anosarudzwa pakati pemamwe mikana kusanganisira chikwata chokutamba muEFAFA Europa League.
Yakanga isiri nguva refu zvisati zvaitika kubva kuTottenham Hotspur mugore re2009, uyewo nezvimwe zvinotevera kubva kuManchester City, Inter Milan, Juventus neGermany maGeneral Bayern Munich, zvakamuita kuti azive kunze kwebhokisi reFrance. Kunyange zvazvo kutama kusati kwamboita muviri nekuda kwechikwata chake chisingadi kumurega achienda, Sissoko akazopedzisira asvika kuNewcastle mugore re2013.
Pana 31 August 2016, Sissoko akasainwa Tottenham Hotspur pamakore mashanu emitambo, ye £ 30 mamiriyoni. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Ukama Hupenyu
Moussa Sissoko ndomumwe wevaduku vebhokisi vakawanda vanoda kuchengetedza hupenyu hwavo hwega pega, kure nemafuta ekufambisa vashandisirwo vehupfumi uye pepanhau. Zvisinei, hazvirevi kuti ane mwoyo unofunga zvishoma nezvake.
Sissoko akaita gorosi kana musikana kunze kwomukadzi akanaka wechiFrench anozivikanwa saMarylou Sidibe (asina kufanana Djibril Sidibe). Vaya vari vasina kuroorwa vanoedza zvakanakisisa zvavo kuti vasazobuda muhurumende yevanhu. Hazviwanzoonekwa pamwe chete panguva dzekubuda uye kunosunungura mafirimu ayo anovaita kuti vanakidzwe nehuwandu hwavo pavanokwira mumotokari dzakasiyana.
Kunyange zvakadaro, Moussa Sissoko ane mwanakomana weC6 ane makore (panguva iyo iyi) anonzi Kai.
Chinyanyozivikanwa pamusoro peamai vaKai avo vaimboonekwa vachingobata mwanakomana wavo vasati vatanga kutamba mutambo pakati peNewcastle neManchester muna April 2016.
Sissoko ane izvi kuti ataure nezvehukama hwake nemwanakomana wake:
"Mwanakomana wangu akwegura zvokuti anonzwisisa basa rangu, paanondiona ndiri munhandare, paterevhizheni kana mune chiziviso, anobva apenga (achinyemwerera). Anozvikudza zvikuru Akatozvirumbidza pamusoro pazvo kune vaanodzidza navo paanoenda kuchikoro achitaura kuti baba vake vanotamba mauto eFrance neNewcastle ".
Sezvakaonekwa pakutanga, mwanakomana waMoussa Sissoko uye Rafa Benitez inoita seine ukama hwepedyo hwakawanda sekuonekwa mumufananidzo uri pasi apa.
Ndezvipi zvingadai zvichiti "zano"Yakadanwa ne Rafa hazvina kutadzisa Sissoko kuti abve mubato re Tottenham mu2013.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Mimhanzi uye Mifananidzo
Sissoko akaratidza kuti hupenyu hwemubheji hahuna kutombotarisana nebhola. Izvi zvinoratidzwa norudo rwake rwemashoko anonyadzisa, zvikurukuru "Superman"Uye"Spiderman"YeDc uye Marvel comics maererano.
Hazviperi ipapo, iyewo unoda mimhanzi yeFrance; Zaz, uye ane chinhu chemaitiro anonyadzisa akaitwa neAmerican mudivi wemhanzi Jim Carey mune mafirimu akaita se "Bruce Wemasimbaose" naizvozvowo "Dumb uye Dumber". Ndiani angambofunga kuti Moussa kuti Sissoko, pasinei nekupenya kwakakomba pachikwangwani kunogona kuva nemwoyo wemwana uye kunakidzwa kwemimhanzi yakanaka?
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Upenyu hwehupenyu
Nekudaro unhu hwaMoussa Sissoko huri kunze-iyo, akambotaura;
"Ndakagara ndakangwara, ndakachengetedzwa uye ndichiremekedza. Izvi hazvidzivisi kuti nditaure kana zvichidiwa.
Pasinei nehutano hwake semuviri wepasi pose, Moussa haanzwi achikurira kune vamwe. Iye akaita se kumba shiri uyo anowanzobuda kunze asi achiona mafirimu, achitamba nemwanakomana wake uye achiona shamwari kana mhuri.
Kare kare munharaunda yake (Aulnay-sous-Bois), Moussa aive nemazita ose emitambo. Zvakanaka, iye aida kurongedza nezvinhu paakanga achiri muduku. Izvi zvakaita kuti ave nezita rokuti "DIY".
"Zvakanaka chaizvo kuti vanhu vachiri kundidana izvo. Ndinozvitora zvakanaka. Izvo zvinondiyeuchidza nezvehuroti dzedu duku. Nguva dzose zvakanaka kuti uone shamwari uye usakanganwa kwawakabva. Nhasi, ndinoita zvakawanda zvishoma 'DIY'. Handina nguva yakakwana uye ini ndinosarudza kutenga fenicha dzatoungana, zviri nyore. "
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-0ther Nharaunda
Sissoko anoda kutamba video games uye kushambira. Anoda motokari zvakananga Audis, Range Rovers, BMWs uye Mercs iyo inoshongedza Garage yake.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Unyanzvi hwehutungamiri
Sissoko aionekwa somutungamiri akaberekwa neNewcastle Coach, Neil Cameron. Izvi zvakaita kuti mutungamiri ape Sissoko mutungamiri wemutungamiri mushure mokunge aimbova chikepe Fabricio Coloccini vakatambura kugadziriswa kunokonzerwa nekukuvara.
Sissoko, uyo akanga ari muchechi yake yechipiri kuNewcastle akashamiswa nebasa rinoshamisa asi haana kumbobvumira mutendi wake kuvimba sezvo akatungamira zvakanaka nechechi yake kuwana zvikamu zvinokosha kubva kune mamwe mauto makuru eChirungu yebhola. Zvisinei, nharo idzi dzakanga dzisingakwani zvakakwana kudzivirira Newcastle kuti irege kupinda mukutora nguva iyoyo.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Zvinoita sekutambura
Sissoko haisi iyo slate yakachena player iyo Ryan Giggs uye Andres Iniesta vaiva. Sissoko akaunganidza chikamu chake chakanaka chekuyeuchidza uye akanga ari kadhi kadiki kakawanda. Akagamuchira kadhi yake yekutanga yechijani pachikwata chake cheEFAFA Champions League kutanga neLiverpool munaAugust 15 mushure mekuuya kwekupedzisira kwemaminitsi 7 emutambo.
MunaDisemba 2013, Sissoko akawana hurukuro yake yekutanga neChirungu Football Association pamusoro pokurova mutambi Mike Jones pachiso.
Izvi zvaive zvakadaro zvakarongwa se "kazhinji', sezvazvakaitika apo paaiedza kubva kuSouthampton's goalkeeper.
Moussa Sissoko Utano Nhau Plus Untold Biography Facts-Chef Sissoko
Pane munhu akamboshamwaridzana nevebhokisi vemazuva mukicheni here?
Zvakanaka, Moussa Sissoko ndeimwe nyeredzi dzeTottenham dzave dzichiratidzwa pane Healthy Living With AIA & Hotspur TV.
Mutsva, Moussa Sissoko uye Hugo Lloris inotungamirirwa nomukurumbira wemudzimai Jeremy Pang naSpurs nutritionist- Hannah Sheridan sezvo vatambi vaviri vanoedza zvakanakisisa kuti vakwanise kubika Prawn Fried Rice uye Thai Green Curry.
Izvozvo zvinofadza, Hapana anoziva, asi chokwadi yakatarisa zvikuru. Kunze kwehuchenjeri hwake hwekugadzirira, Moussa Sissoko anoda mapurofisi echiFrench uye ndiro dzeItaly. Nokuda kwekudya zvakatsanya, anofarira kutora pepperoni pizza.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nokuverenga Moussa Sissoko Childhood Indaba pamwe ne untold biography chokwadi. At LifeBogger, tinoedza kururamisa uye kusaruramisira. Kana ukaona chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka munyaya ino, chinyorwa iwe kana kuti taura nesu!